घारको बिरौटादेखि करिब तीन कि.मि. पहुँच मार्ग (सडक) खनेको आयोजनाले सडकको स्तरोन्नतिको कामसँगै निर्माण पूर्वका तयारीलाई तीव्रता दिएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत प्रकाश चन्द्र पौडेलले बताए । आयोजनाको मुख्य कामका रूपमा हेरिने सुरुङ मार्गमा विष्फोटनका लागि नेपाली सेनाको क्याम्प राख्न आवास निर्माण भई सकेको छ । ‘सडकबाट प्रभावित अधिकांशलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौँ, बाँकी केहीको पनि कागजी प्रक्रिया पुगेपछि उपलब्ध गराउँछौँ, निर्धारित समयमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम थाल्छौँ’ उनले भने ।
घारको कुरिला बगरमा बाँध रहने यस आयोजनामा विद्युत गृहसम्म पानी खसाल्नका लागि तीन कि.मि. ४८ मिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ । सुरुङ मार्ग हुँदै ल्याइएको पानीलाई करिब एक हजार २०० मिटर पेनस्टक पाइप मार्फत् पोखरेबगरमा रहने विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको यस आयोजनामा दुई अर्ब ४१ करोड लगानी अनुमान गरिएको आयोजनाका इञ्जिनियर जोसेफलाल बज्राचार्यले जानकारी दिए ।